Dhibaatooyinka Mucjisada iyo Iskuduwaha: Ka-fogaynta Su'aasha
Diinta & Ruuxnimada Caqiidada & Agnosticism
Dhibaatooyinka ku jira Fikirka iyo Iskuduwaha: Ka Jawaab Su'aasha Su'aasha
Kuma jawaabin Caqabadaha Dacwadda
Markaad isku dayeysid inaad kiis ku sameysid mawqif ama fikradda, waxaan si joogta ah ula kulannaa su'aalaha ka hortagaya isku-xidhnaansho ama ku- oolnimo ee booskaas. Marka aan awoodno inaan si habboon uga jawaabno su'aalahaas, booskeena ayaa sii xoogaysanaya. Markaan ka jawaabi kari lahayn su'aalaha, markaa booskeena waa daciif yahay. Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxaan ka fogaaneynaa su'aasha, markaa nidaamkayaga laftigiisu laftiisa ayaa loo muujiyaa sida suurta galka ah.
Sababaha suurtogalka ah
Waa, nasiib daro, caadi ahaan in su'aalo badan oo muhiim ah iyo caqabado aan laga jawaabin - laakiin sababta ay dadku sidan u sameeyaan? Waxaa jira sababo badan oo kala duwan , laakiin mid caadi ah ayaa laga yaabaa inuu rabo inuu ka fogaado qirashada in ay khaldan yihiin. Waxaa laga yaabaa inaanay haysan jawaab fiican, iyo "Ma ogi" xaqiiq ahaan waa mid la aqbali karo, waxay u muuqan kartaa oggolaansho aan la aqbali karin oo ugu yaraan qalad ah.
Sabab kale oo macquul ah ayaa ah in jawaabta su'aasha laga yaabo in ay horseed u noqoto mid ka mid ah in la ogaado in booskoodu uusan shaqaynayn, laakiin booskaasi wuxuu kaalin muhiim ah ka ciyaarayaa muuqashadooda. Tusaale ahaan, qof ego qofku wuxuu ku tiirsanaan karaa qadarinta kooxo kale oo ka mid ah kuwa ka gaabiya iyaga - xaaladdan oo kale, qofka waxaa laga yaabaa inuu si xoogan u jilicsan yahay in aanu si toos ah uga jawaabin su'aalaha ku saabsan xaqiiqda ah ee loola jeedo liita, haddii kale waxaa laga yaabaa inay qiraan in aanay ka sareynin kaddib.
Ma ahan dhacdo kasta oo qofku u muuqdo in uu ka fogaanayo su'aasha u qalantaa sida - mararka qaar qofku wuxuu u maleynayaa inay horey uga jawaabeen ama meel kale oo geedi socodka ah. Mararka qaar jawaab dhab ah ma isla markiiba u muuqato jawaab. Tixgeli:
Bukaanka : Miyuu jiraa xaalad nololeed oo khatar ah, dhakhtarka?
Dhaqtarka : Waxaan u baahnaan doonnaa inaan samayno baaritaanno intaan ka hor inta aan go'aansan karno.
Tusaale ahaan, dhakhtarku wuxuu u sheegay bukaanka in aanay ogayn haddii xaaladdiisu tahay mid naf-hurin ah, laakiin ma aysan dhihin si cad. Sidaa darteed, inkastoo ay u muuqan karto inay u muuqato sidii ay uga fogaatay su'aasha, dhab ahaantii, waxay jawaab u bixisay - laga yaabee mid ka mid ah oo ay u maleyneysay inay noqon doonto mid xiiso badan. Ka soo horjeeda kuwan soo socda:
Dhakhtar : Ha ka welwelin arrintaas hadda. Waxaad heleysaa nasasho nasasho, waxaanan noqon doonaa berrito.
Halkan, dhakhtarku wuxuu ka fogaadey inuu ka jawaabo su'aasha oo dhan. Ma jiro wax muujinaya in dhakhtarku wali u baahan yahay inuu sameeyo shaqo dheeraad ah si uu jawaab ugu helo; Taa bedelkeeda, waxaynu heleynaa kicin ah oo maqal shaki leh sida uusan rabin inuu wajiga u sheego bukaanka inuu dhiman karo.
Marka qofku ka fogaado su'aalaha tooska ah iyo kuwa adag, taasi maaha mid xaqiiqo ah in natiijadooda ay khalad tahay; waxaa suurtagal ah in booskoodu yahay 100% sax ah. Taa bedelkeeda, waxa aan soo gabagabeyn karno waa in habka sababaynta u horseedda inay sheegto jagadooda ay khasaari karto. Habraac xooggan oo xoog leh wuxuu u baahan yahay mid ka mid ah horayba ula macaamilay ama awood u yeeshay in wax laga qabto arrimaha muhiimka ah. Tani, dabcan, macnaheedu waa inay awoodaan inay ka jawaabaan su'aalaha adag.
Caadi ahaan marka qofku ka hortagayo su'aasha, su'aashaas waxaa soo bandhigay qof kale dood ama dood. Xaaladaha noocaas ah, qofka ma ahan oo kaliya inuu caqli-galo cillad-xumada laakiin wuxuu sidoo kale ku xad-gudbayaa mabaadii'da aasaasiga ah ee wadahadalka. Haddii aad dooneyso in aad qof la sheekaysato qof, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato inaad ka hadasho faallooyinka, cabashooyinka, iyo weydiimaha. Haddii aadan sameynin, markaa kadib ma ahan laba siyood oo is-waydaarsiga macluumaad iyo aragtiyo.
Si kastaba ha noqotee, taasi ma aha macnaha kaliya ee qofka laga yaabo in uu ka fogaado su'aalaha. Waxa kale oo suurtagal ah in la tilmaamo in dhacdaba xitaa marka qofku keligiis la joogo fikirkiisa iyo fikrad cusub. Xaaladahan oo kale, waxay hubaal ahaan doonaan inay la kulmaan su'aalo kala duwan oo ay iyagu is weydiiyaan, waxayna u diidi karaan in ay ka jawaabaan sababo ka mid ah sababaha kor ku xusan.
Tifatiraha Leonardo Da Vinci: Bani'aadamnimada, Saynisyahanno, Dhaqameed
Faahfaahinta qiyamka ee Falastiiniyiinta Falastiiniyiinta Aristotle
Ma yihiin Atheistayaasha ka qulqulaya kuwa yaryar?
Dabacsanaanta Atheism iyo qosol diidmo
Waa maxay bani-aadminnimada sirta ah?
Robert A. Heinlein Qodobbada diinta iyo diinta
Miyuu abuuraa dareen maskaxeed?
Xolotl, Canine God of Twins iyo Sickness ee Aztec Diinta
Soo bandhigida adeecadaada
Anshaxa & Ahliyada: Falsafadda Akhlaaqda, Xulashada, iyo Habdhaqanka
Haddii Atheistayaashu diidaan Christmas ama ay u dabaaldegaan?
Farqiga u dhaxeeya xoriyadda diinta iyo xorriyadda diinta
C Programming Language ee Bilowga
Intee Ayay Qiimaha Ku Lahayn In Lagu Dalbado Koolejka?
Shan Meelood oo ah Jaantuska Pentatonic ee Guitar
Carruurnimada iyo Cilaaqaadka Jacaylka Jacaylka
Saameynta Quantum Zeno
Cabbitaanada Brown: Maxay Tahay?
Argh! 7 Burcad-badeed caan ah iyo calamadoodii
Guriga Tobnaad - Guryaha Astrological
Sikhism Matrimonial Dos iyo Don'ts
Xaqiiqooyinka Nihonium - Qodobka 113 ama Nh
Sida loo sameeyo Baaskiil biyo ah oo la cuni karo
Isbarbardhigga dhibcaha ACT ee Jaamacadda California
Magacyada Magacyada Shaydaanka
Moon Sagittarius (Transit) - Bilo iyo Happenings
Waa maxay nooca Ford Mustang ugu caansan?
Kuwa Ugu Horeeya ee Qaadista Lacageed ee Cashuurta Cashuurta (HBTC)
Qaamuuska hore ee shaqooyinka - Mihnadaha laga bilaabo S
Maxay awowgeyga u bedeshay magaciisa?
Dib u eegida Movie Troy
Augusta Golf Kulanka Qaranka Par-3
Maxaa Daahir ah?
Summer Beach Read Readers
8-tii Bandhigga Bandhigga Bandhigga Maalinta Hiddaha